Nhau - Is corten simbi inotsemuka here?
Corten simbi kana Weathering simbi ndiyo yakasarudzika mhando yakaderera alloy simbi akateedzerana pakati isina stainless uye yakajairwa kabhoni simbi. Iyo ine mumhepo yekudzivirira yekukanganisa uye inoratidzira chimiro kupfuura yakajairwa kabhoni simbi, uye mutengo wacho unehupfumi kupfuura hwesimbi isina huni.
Iyo corten simbi ndiro ndeimwe yesimbi simbi, saka inotyisa. Mune yenguva dzose corten simbi zvinhu zvinogona kugadzirwa kuita matatu-mativi chimiro, senge mraba, pembetatu, rectangular, oval etc. Iyi dhizaini inogona kuratidza iyo corten chifananidzo chechiratidzo mune zviri nani uye tinogona kugadzira chero chimiro kana iwe uchinge wativimbisa ides yako.
Aya makara anonamira anogona kuchengetwa anopfuura mazana emakore. Chikonzero chikuru ndechekuti mushure mekuratidzwa kune yakasikwa ekunze ekunze, iyo simbi yemukati inongoerekana yaumba sosi yekudzivirira inodzivirira kana yakabatana nemweya kana mvura yemvura etc. Uye hapana chikonzero chekupenda chero dziviriro yekudzivirira kana kuita chero chinhu. Iyo sarudzo yakanaka yekushongedza nzvimbo yekunze, handizvo here?
Takaita zvimwe zvirongwa zvekunze kwevatengi vekunze zvisati zvaitika uye kunyanya kushandisa corten simbi sechinhu chikuru. Zvichakadaro isu zvakare takarongedza akawanda emhando yepamusoro simbi mifananidzo inoshanda kune yedu munharaunda muvezi kana mugadziri, anova mumwe wevaimbi anozivikanwa muChina. Chigadzirwa chedu chakagadzirwa nemaoko chakakurumbira pamusha nekune dzimwe nyika.
Vese mune fekitori yedu yese vanogona kutsigira OEM uye ODM yemhando dzese dzekunze mifananidzo. Tine yakanakisa dhizaini timu yekusangana chako chaunoda. Isu takanangana nekugadzirwa kwezvivezwa kugadzira munda uye hapana murume wepakati. Saka Tinogona kukupa iwe yemakwikwi uye inonzwisisika mutengo nguva dzose.
Kero yeHofisi: ROOM 1407, CHANGAN BLDG, NO.75-77 LVLING ROAD, HULI DISTRICT, XIAMEN, 361009, FUJIAN, CHINA
Nhare Yakananga: + 86-592-5970572
M: + 86-13600922114
Nguva yekutumira: Jul-05-2020